Freshwater pearl akpa eriri yinye
3-oyi akwa fresgwater pearl mgbaaka
A na-eji mgbaaka ọla aka emezi mgbaaka. Eke na-acha ọcha, pink, peach agba nke pealu. Ogologo ya bụ sentimita asatọ na nha ya nwere ike gbanwee. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye mmiri mmiri dị ọcha n’ụdị dị iche iche, gụnyere pear ndị ọzọ e sijiri esiji. Enwere ike ịhazi ya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 20 nke ọla na-eme ahụmịhe, ma nwee ọtụtụ ahụmịhe na teknụzụ nwere ọgụgụ isi na ịmịpụta ihe bara nnukwu uru, pel, ọla edo na ọla ọcha.
Mara mma kitty gburugburu pearl ọla set
Agba ahụ nke nkume pel Akoya na-achakarị ọcha. Ezigbo okirikiri ndị nwere agba pink bụ ndị kasị baa uru. Ebe ọ bụ na mkpokoro nne nke peel Akoya pere mpe, pel ndị a na-azụlite pere mpe, pear ndị buru ibu karịa 9 mm dị obere ma dịkwa oke ọnụ. Agba agba na-acha ọcha, ude, ọla edo na-acha anụnụ anụnụ. Agba bụ isi na-ekpughe agba pụrụ iche pụrụ iche, nke mere ka ọ na-enwu na nwanyị ọ bụla. Ọ dị nro, mara mma, nrọ na ọnụ ahịa. Colordị pink pink pụrụ iche na-eme ka ọtụtụ ihe ụtọ pụrụ iche nwere ebe dị nro maka ya.
7mm Now Freshwater Pearl Mgbaaka, Black Pearl mgbaaka
Obere mmiri a na-ete mmiri dị ka pearl, nke na-eme ka enweghi ụyọkọ mmiri mmiri. Ihe ọla edo ahụ na-eme ka mgbaaka ghara ịdị oke oke, ugbu a idozi pealu agaghị ada. Mgbaaka a bụ nke 7mm Gburugburu mmiri mmiri dị mma na ọlaọcha 925, ọla edo a kụrụ, na-eme ka agba ahụ adịghị agbagha. Pearl ahụ dị oji, ma ọ dị ka peacock acha anụnụ anụnụ site n’ebe dị anya. Ọmarịcha agba nwere ike ịnwụ n'anya ndị mmadụ n'otu ntabi anya.
Fashion Freshwater Pearl Brooches Shell & Gold Plated Jewelry Wedding Mara mma Zircon Flower Brooch mkpọ N'ihi Women
A na-eji peel, mmiri pearl na ọla kọpa mee mmiri a. Flowerdị ifuru ahụ mara mma na-agbakwunye onye nwe ya mmetụta nke ịdị nwayọọ. Ngwunye brooch a dabara adaba maka oge opupu ihe ubi. Mgbe ihe niile gbaghachiri, okooko osisi na ahịhịa na-agbakwunye, dị ka a ga - asị na ha na - aza ibe ha na mmiri abịawo. Ngwunye brooch a na-eji bọtịnụ pearl bọtịnụ, nke na-egosipụta n'ụzọ zuru oke ịma mma nke pel ma ghara imebi ya. Pearl na petals na-achọ ịgwakọta ọnụ, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara ịmata ọdịiche.
26-29mm Ebube Agba Biwa Freshwater Pearl Bead Strands
Aha Biwa beads sitere na Lake Biwa na Japan. A na-akpọkarị pel a na-emepụta n'Ọdọ Mmiri Biwa dị ka Bewa beads. Agbanyeghị, n'ihi mmetọ dị oke njọ na mmiri nke Ọdọ Mmiri Biwa na Japan, enweghị isi karịa pearl a ga-azụ site n'Ọdọ Mmiri Biwa.
Na China, a na-akụ ọtụtụ pel, na nkume pel biwa bụ otu n'ime ha. Bodydị ọdịdị ya dị ogologo ma dị gịrịgịrị, nke bụ ihe doro anya na uru ya ma e jiri ya tụnyere ụdị pearl mbụ ma ọ bụ nke oval. Nwere ike iji ya mee N'onwe Gị ọla nke ụdị dị iche iche, ọmarịcha mma nke ọla ọma ya na-enweghị atụ.
7-7.5mm Freshwater Pearl gburugburu Pearl Beads
Ebe ọ bụ na a na-azụ nkume pel dị mma n’enweghị ntọala, ihe ndị ọzọ na-apụtaghị n’oge ha ga-emetụta ha. Enwere ọtụtụ nkume pel na-emezighị emezi. ụdị izugbe dị gburugburu, oval, akara bọtịnụ, nke osikapa, nke Tomato, nke pụrụ iche, wdg. N’etiti ha, pealu gburugburu na-erughi 5% nke mkpokọta pearl niile. A pearl zuru oke ma na-enweghị ntụpọ n'okpuru ìhè siri ike bụ n'ezie otu n'ime iri puku kwuru iri, ya mere uru nke ezigbo mmiri mmiri mmiri ka dị oke elu. Ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị n’ezie na pearl dị ụtọ mmiri ruru ọtụtụ puku ma ọ bụ ọbụna iri puku kwuru iri.
Nkume mmiri dị ọcha jupụtara na agba, n’ozuzu ya ọcha, piich, pink, pink na agba ndị ọzọ, yana pealu ahụ dị larịị ma na-egbuke egbuke dị nro, na-eyi ya mmetụta nke ụmụ nwanyị ọwụwa anyanwụ.
Button Shape White Pink Agba Mabe Kpụrụkpụrụ Ọlamma maka Mmakọ ọla Ime 9-10mm Freshwater nkume pel No Oghere
Nke a bụ ezigbo nkume pel. Agba bụ eke. Ọ bụ ezie na elu ya dị ezigbo nro, enwere ike ịhụ anụ ahụ n'ụzọ doro anya n'okpuru ọkụ siri ike, na textures ndị a na-agbakwunye ụdị mma dị iche na ya. Ime ka ọ bụrụ ngwa ngwa uwe ga-agbakwunye ụfọdụ uwe na uwe, dị mfe ma bụrụ otu. Nha ya bukwara ibu maka pearl mabe, o nwere ike ime ka ị bụrụ ebe nlebara anya. Ma ọ bụghị dị iche iche dị ka pel, nke a dị mma maka ndị nwere ntakịrị nsogbu-na-agwụ aghara, maka ndị na-amalite N'onwe Gị
Mgbaaka Mgbaze Freshwater Pearl Water
Emere mgbaaka a ka ọ mepee, ya mere ọ dabara nke ọma maka onye ọ bụla iyi ya, ọ gaghị emekwa ka ndị mmadụ sie ike. Ngwa pel na-agbakwunye ịdị mma nke nwanyị na ya na-emekwa ka mgbaaka ahụ ghara ịdị mma. Obere pel abụọ ahụ dị nso gosipụtara ntakịrị ịkpachara anya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị tụgharịa aka gị ma were ihe, ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta ọmarịcha ọla ala a dị ntakịrị.
N'ezie, enwere ike dochie ya na agba ndị ọzọ nke pel, dị ka pink, odo odo, na piich, nke a dabere na mmasị onwe onye. Ma anyị na-a paya ntị na nsogbu nke agba agba.
16mm Osimiri Pearl Edison Pearl Beads
Nkume Edison bụ pearị a na-emepụta mmiri dị na mmiri, nke buru ibu karịa nkume pel ọhụrụ. Ma dayameta na nchapụta dị nso na pel pel dị oke ọnụ, na Edison n'ozuzu ya ka a zụlitere karịa ihe karịrị afọ atọ, ya mere o nwekwara agba ọgaranya na ọnụ ala dị ala nke ndị na-enweghị pel ọma. Mana ọ bụghị nkume pel niile nke Edison zuru oke, akụkụ buru ibu n’ime ha ga-eto n’ime ụdị Baroque, gburugburu zuru oke na ntụpọ ole na ole dị obere.
Ma nke na-egbu egbu emeghị ka a nabata ya nke ukwuu! Mgbe ị yikwasịchara oge ụfọdụ, elu nke akwa pearl Edison ga-apụta nke ọma. Igwe pel ahụ adịkwaghị ire ụtọ, na-efunahụ ihe na-acha, agba ya dịkwa nkọ.
Freshwater Pearl Bridesmaid Onyinye, White Gray Freshwater Ọla Pel, Pearl Stud ọla ntị, Aaa Mmiri Ahia, Ọla Ntị Agbamakwụkwọ, Ezigbo Omenala Cultured Freshwater Pearl,